La -qabsashada EcoFellows - Kadib iyo Hadda - Xarunta EcoTechnology
Sannad kasta tan iyo 2012, EcoFellows -ka qalin -jabiyay waxay aadeen fursado xiiso leh oo dhinacyo kala duwan leh. Si aad u ogaato waxa EcoFellows-ka 2020-2021, Ozette iyo Jared, ay ku sugnaayeen, sii akhri!
Waxay ahayd wax weyn in lala qabsado Jared Shein. Wuxuu hormuud ka ahaa Barnaamijkeenna Wacyi -gelinta Virtual wuxuuna aad ugu dadaalay inuu dejiyo halbeegga bandhigyada CET, iyo mashaariic kale oo badan. Sannadkan gudihiisa, wuxuu kaloo bartay sida loo sameeyo sagxad wax ku ool ah oo leh nuxur xiiso leh. Wuxuu yiri tani waa “sidaas, aad bay waxtar u leedahay” marka la raadinayo tallaabooyinka xiga kadib waqtigiisii ​​CET. Wuxuu sidoo kale mahadcelin la wadaagay lataliyayaashiisii ​​oo ka caawiyay inuu qiimeeyo dalabyada shaqo ilaa dhammaadka sanadka. Jared wuxuu sheegay inuu aad u xiiseeyo la shaqeynta Kooxda Isgaarsiinta, gaar ahaan Ozette, saaxiibkiis. Labaduba shaki la'aan waxay sameeyeen laba qof oo firfircoon!
Jared hadda wuxuu ka shaqeeyaa Ohio at Hal abuurayaasha Tamarta Brite oo ah Khabiirkooda Khibrad Bilowga. Halkaas, wuxuu ka caawiyaa farsamo -yaqaannada tamarta cusub ee shirkadaha bilowga ah inay dhisaan badeecadooda, laga bilaabo tusaalaha ilaa suuqa. Ku -biirinta xirfadaha isgaarsiinta iyo xiriirinta ee laga bartay EcoFellowship, Jared wuxuu jaangooyay talooyinka kheyraadka Brite ee macaamiisha. Isaga oo ku hagaya shirkadaha faylalka tacliimeed kobaca waara, wuxuu gacan ka geysanayaa kor u qaadista tamar nadiif ah oo hufan.
Dib -u -fiirinta, Jared wuxuu la wadaagay inuusan bilaabin xirfadiisa isagoo og meesha uu rabo inuu aado. Hadda, wuxuu dareemayaa ammaan ku aaddan jihada uu qaaday. “Wehelnimadu waxay ii iftiimisay in xirfaddaadu aysan ahayn inay noqoto hal riyo oo aad taqaan noloshaada oo dhan. Dadka badankoodu waxay qaataan safar shaqo, ma aha waddo. Waxaan bartay inaadan u baahnayn inaad ogaato ama haysato shaqadaada riyada hadda, kaliya maskaxda raadinta tallaabada xigta meesha aad rabto inaad aado. “Jared iyo erayadiisii ​​xigmadda lahaa waa la tebi doonaa!
Ozette Ostrow, saaxiibka kale ee 2020-2021, ayaa sidoo kale faahfaahin ka bixisay qaababka wehelnimada CET ay ugu diyaarisay shaqadeeda cusub. Doorkeeda cusub wuxuu ku jiraa Dhimista Dhaqaaqa, oo ah La -taliye Joogto ah. Waxay hadda ka qabataa goobta shaqada, ka caawinta isbitaallada sidii ay ula tacaali lahaayeen qashinka caafimaadkooda la nidaamiyay, iyo sidoo kale dadaalladooda dib-u-warshadaynta. Waxbarashada iyo la -talinta yareynta qashinka ayaa qaabeeya dhinacyada ugu muhiimsan shaqadeeda.
CET waxay caawisaa ganacsiyada guud ahaan halkii ay ka heli lahayd meherado cayiman oo daryeel caafimaad ah. Si kastaba ha ahaatee, Ozette waxay dareensan tahay wixii ay ka baratay CET si wanaagsan loogu tarjumay shaqadeeda cusub. Tani waa sababta oo ah waxay ku qalabeysan tahay aqoon ku habboon. La shaqaynta dadweynaha iyo barashada sida ugu wanaagsan ee wax loo baro dadka kale aad bay faa'iido ugu lahayd horumarkeeda xirfadeed. Gaar ahaan, ogaanshaha ku saabsan ka shaqaynta qashinka dib -u -isticmaalkiisa ayaa weli ku habboon shaqadeeda. Waxaa jira wax badan oo is -dhaafsan oo ku jira shaqada labada urur. "Dhimista Dhaqdhaqaaqa ayaa aad u badan oo ku saabsan ka caawinta ganacsiyada inay yareeyaan qashinkooda, taas oo qayb ka ah hadafka CET." Ozette ayaa dib u xasuustay.
Waxay la wadaagtay in wehelnimadu ay ku qalabeysay khibrad iyo aqoon macno leh gaar ahaan suuqgeynta iyo isgaarsiinta. Iyada oo wehel ah, waxay ka faa'iideysatay la-talinta, waxayna dhistay xirfado ay ka mid yihiin isgaarsiinta diiradda lagu saaray kooxda. Xallinta dhibaatada iyo xirfadaha maaraynta waqtiga ee ay ka qaadatay CET ayaa si weyn u caawisay.
In kasta oo qorshayaasheeda mustaqbalka aan la adkeyn, haddana Ozette waxay xustay inay sidoo kale xiisaynayso sii jiritaanka shirkadaha waxayna ka fikiraysaa raacitaanka MBA. Wax kasta oo ay go'aansato, waxaan ognahay in saaxiibkan hore ee cajiibka ah uu sii ahaan doono mid heer sare ah!
La kulan saaxiibbada sannadkan!
Waa waqtigii lagu soo dhaweyn lahaa wareeg kale oo EcoFellows ah kooxda ka socota Xarunta EcoTechnology! Barnaamijka EcoFellowship waa jagada wehelnimada ee mushaharka leh hal sano si loola shaqeeyo shaqaalaha CET iyo EcoFellows kale si ay u fuliyaan hawlo kala duwan oo la xiriira dadaallada ficilka cimilada iyo barnaamijyada waxbarasho ee Galbeedka Massachusetts. EcoFellows waxay taageertaa dadaallada CET si ay u caawiso dadka deggan, ardayda, hay'adaha iyo ganacsiyada gobolka oo dhan barnaamijyada socda ee ku -oolnimada tamarta, adeegyada tamarta guriga, tamarta la cusboonaysiin karo, iyo yareynta qashinka iyada oo loo marayo dib -u -warshadaynta, dib -u -isticmaalka iyo bacriminta. EcoFellowship -ku wuxuu kaloo siiyaa fursado horumarin xirfadeed kuwaan ka qalin jabiyay kulliyadda, isagoo ku dhiirrigelinaya inay ku lug yeeshaan wacyigelinta bulshada, barnaamijyada dugsiga, iyo ururada kale ee deegaanka.
Waxaan ahay qof deggan Minnesota oo dhan, oo hadda ku salaysan meel ka baxsan Minneapolis Waxaa naloo yaqaan “Dhulka 10,000 Harooyinka,” sidaa darteed marna ma yaraado waxqabadyada bannaanka ee halkan lagu sameeyo! Waxaan jeclaan lahaa inaan sheego in macallinkii iigu horreeyey uu ahaa beertayda. Waxaan ku qaatay kulayl badan oo carruurnimadayda ah oo aan ku dhex lugayn jiray digirta digirta oo aan daawanayay bumblebees oo soo saaraya okra. Inaan awoodo inaan cuno cunno aan naftayda ka koray tan iyo yaraantaydii waxay abuurtay xiise qoto dheer u leh dabeecadda iyo waxa aan hadhow baran doono in loogu yeero ecology aadanaha. Waxaan had iyo jeer dareemayay mas'uuliyad xooggan oo ah inaan dhulka daryeelo, taasina waa ta igu kalliftay inaan ku barto kulliyadda Macalester College.
In kasta oo aan ogaa waxa aan doonayo inaan ku biiro, haddana waa inaan sahamin badan sameeyo si aan u helo waxa aan si gaar ah u rabay inaan ku sameeyo gudaha deegaanka ballaaran. Waxaan nasiib u yeeshay inaan helo layliyo dhowr ah oo la xiriira sannad kasta oo i baray casharro ku saabsan isbeddelka cimilada, ka shaqaynta ilaalinta, iyo hoggaaminta deegaanka. Awood u lahaanshaha inaan horumariyo qaabka shaqadayda ayaa i siiyay awood aan ku abuuri karo saamayn togan ee bulshooyinkayga. Waxaan isku dayay waddooyin badan oo xirfadeed, laga soo bilaabo qowmiyadaha ilaa dhisme waara, iyo hal dhibic xitaa waxaan ku fikiray inaan noqdo laxamiistaha muusigga ku wajahan deegaanka (qof walba wuu ku mahadsan yahay inuu mid gaaban noolaa)! In kasta oo aan jeclaa daqiiqad kasta oo ka mid ah fursadahaas, midkoodna ma i dareensiineynin sidii aan yeelay markii aan baranayey cunno iyo waxbarasho waarta.
Sawirka laga soo qaaday Beerta Qaranka ee Arches, oo lagu qaaday safar waddo sawir qaadis ah oo aan sameeyay bishii Janaayo ee la soo dhaafay
Hore u sii soco ilaa Diseembar 2020, markii aan ka qalin jabiyay Macalester oo aan ku qaatay shahaadada Barashada Deegaanka iyo Waxbarashada iyada oo xoogga la saaray Nidaamyada Cuntada waara. Iyada oo aan la hubin inta badan, waxay ahayd labadaba waqti aad u xiiso badan oo neerfaha ku xiraya in la galo shaqaalaha.
Waan ku faraxsanaa inaan codsado CET's EcoFellowship sababtoo ah waxaan jeclaa barnaamijyada kala duwan ee ay bixiyaan, laga bilaabo soo kabashada cuntada ilaa waxbarashada ku saabsan xisaabinta tamarta guriga. Waxaan doonayay inaan wax ka barto intii karaankeyga ah oo ku saabsan xalalka wax ku oolka ah iyo kuwa sayniska ku saleysan ee dhibaatada cimilada. In kasta oo aan hadda bilownay, maalin kasta waxaan dareemayaa inaan haysto waxoogaa hay'ad ah oo ka jawaabaya arrimaha deegaanka. Kooxdu aad bay u soo dhaweynayaan mar walbana waxay nagu dhiirrigelinayaan inaan su'aalo weydiino, taas oo shaki la'aan kobcin doonta xiisaha aan u qabo. Aad ayaan ugu mahadnaqayaa inaan noqdo EcoFellow -ka CET oo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan arko halka sannadkani ina qaadanayo!
Fatin S. Chowdhury
Gurigeygu weligiis wuxuu ahaa Magaalada New York- laga yaabee in loo yaqaan dhismayaasha dhaadheer marka loo eego dabeecadda. Si kastaba ha ahaatee, caqiidadayda islaamka iyo dhinacyada magaalada, sida jardiinooyinkeeda la yaabka leh, waxay igu sii xireen inaan ku xidhnaado aqoonta sayniska iyo muhiimadda wakiilnimada deegaanka.
Ka dib markii aan wax ku bartay Dugsiga Sare ee Hunter College, waxaan ku takhasusay Bayoolaji oo aan ku bartay Anthropology ee Jaamacadda Stony Brook. Waayo -aragnimadani waxay sii xoojisay jacaylka aan u qabo Long Island. Xilligii semester -kii iigu dambeeyay, ka hor inta aysan fasallada si ku -meel -gaar ah u socon, waxaan awooday inaan koorsada Baxnaaninta Mammal iyo Turtle Sea Sea ka qaato xerada quruxda badan, ee ku taal Southampton. Fasalka waxaa baray Professor Maxine Montello, oo ah Agaasimaha Xarunta Badbaadinta Badda ee New York. Waan ka naxay inaan wax badan ka barto iyada oo ku saabsan siyaabaha tirada badan ee aadanuhu ugu hanjabaan nolosha badda. Oo ay ku jiraan waxyaabo ay ka mid yihiin dhalinta qashinka xad -dhaafka ah. Sidan oo kale, waxaan go'aansaday inaan la dagaallamo burburka deegaanka iyada oo loo marayo wacyigelin, waxbarasho, iyo falal kale.
Sawir laga soo qaaday shaybaarka qoolleyda badda ee NYMRC, oo uu qaaday Dr. Kurt Bretsch
Ka dib markii aan qalin-jabiyay, waxaan ku qaatay xoogaa la-taliye marka hore barnaamijka Machadka Teknolojiyadda Massachusetts ee barnaamijka STEAM Ahead Full, ka dibna barnaamijkooda Afterschool-tastic, oo aan la shaqeynayay ardayda dugsiga sare iyo inta badan ardayda yaryar, siday u kala horreeyaan. Manhajka barnaamijka koowaad wuxuu diiradda saaray casharro go'an, halka manhajka Afterschool-tastic uu ku jiray la taliyayaasha. Sidaa darteed, waxaan go'aansaday inaan casharro ka bixiyo mowduucyo kala duwan oo ay ku jiraan qadiimiga qadiimiga ah, hidaha iyo dhaqanka.
Wax yar ka dib, waxaan la kulmay CET iyo fursadaha ay ka haysteen Idealist, oo ah degel aan si joogto ah u daalacdo si aan u helo shaqo ku habboon isbeddel-u-jihaysan. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan taas ka helay EcoFellowship! CET waxay sii wadaa in lagu aamino inay qabato shaqooyin aasaasi u ah adeegyada qashinka iyo tamarta. Waa la fahmi karaa sababta Xarunta Ecotechnology ay u jirtay tobannaan sano. Aad ayaan ugu faraxsanahay in shaqadeedu la xiriirto ifafaalaha sida Qashinka Zero iyo kordhinta dhaqdhaqaaqa waxtarka dhismaha. Waan ku faraxsanahay inaan wax ka barto sida waax kasta oo ka tirsan CET ay gacan uga geysato CET shaqada.
Mustaqbalka, waxaan rabaa inaan iska qoro xubnaha qoyska si aan u helo barnaamij iskaa wax u qabso ah oo la shaqeeya orangutan -ka Indonesia, anigoo isku daraya dareenkayga deegaanka iyo badbaadinta xoolaha. Marka la eego himilooyinka xirfadeed, waxaan jeclaan lahaa in aan adeegsado xirfadaha kala duwan ee aan ku beero iyada oo aan u shaqeeyo Xarunta Ecotechnology sida EcoFellow si aan hoggaamiye ugu noqdo goob sida bayoolajiga ama ilaalinta.
By Xarunta EcoTechnology|2021-09-15T09:35:51-04:00September 1st, 2021|EcoFellows, News|